सही काम गरेर मात्र सफल भइन्छ – " कञ्चनजंगा News "
सही काम गरेर मात्र सफल भइन्छ
No Comments on सही काम गरेर मात्र सफल भइन्छ
अहिलेको विश्वव्यापीकरणको युगमा मानिसहरु सफलताका लागि कुदिरहेका देखिन्छन् । तर, अधिकांश मानिसले सफलताको स्वाद चाख्न पाइरहेका हुँदैनन् । कतिपय मानिसहरु मेहनत नगरेका कारणले असफल भएका देखिन्छन् भने कतिपय चाहिँ एकदमै कडा मेहनत गर्दा पनि सफल भइरहेका हुँदैनन् ।
अधिकांश असफल मानिसहरु लगातार एकै प्रकारका प्रयासहरु गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरु सफल हुन चाहान्छन् । तर, आफ्नो काम गर्ने तरिका, बानी भने छोड्न तयार हुँदैनन् ।
नयाँ चिज प्राप्त गर्नका लागि पुरानो चिज त्याग्न तयार हुनुपर्छ । सबैका आ–आफ्ना समस्या हुन्छन् र आफ्नो समस्या सबैलाई ठूलो लाग्ने गर्छ । तर, समस्याको हल पनि हामीसँगै हुन्छ ।
कति काम गरियो भन्दा पनि कस्तो काम गरियो भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । कति भन्नाले संख्यात्मक र कस्तो भन्नाले गुणात्मक शब्दलाई जनाउँछ । कति र कस्तो दुबैको आ–आफ्नो महत्व होला । तर, मुख्यतः पटक–पटक असफल हुँदा पनि त्यही तरिकाले काम गरेर सफल हुन खोज्नु मूर्खता बाहेक केही होइन । किनभने, जतिपटक हिँडे पनि गलत बाटोमा हिँडियो भने गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन । गन्तव्यमा पुग्न सही बाटो हिँड्नैपर्छ । कहिलेकाँही बाटो बिराइयो भने सही बाटो पत्ता लगाउनुपर्छ वा आफैंले नयाँ बाटो बनाउनुपर्छ ।
कामको राम्रो नतिजा आउनका लागि कसरी गर्ने भन्ने थाहा पाउन जरुरी हुन्छ । कसरी भन्ने शब्दले मानिसको काम गर्ने तरिकालाई जनाउँछ ।
मानिसले कुनै पनि काम गर्दा सफलता प्राप्त नभएसम्म कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न गरिरहेमा सफलता प्राप्त गर्न सक्छ । असफलताका कारणहरुलाई कसरी असफल भएँ भन्ने प्रश्न गरिरहेमा सफलताको बिन्दु पत्ता लगाउन सकिन्छ । किनभने, अघिल्लो कार्यको असफलताका कारकतत्वहरु के–के थिए भन्ने जवाफ पत्ता लाग्छ ।
एकजना व्यक्ति जागिरको पहिलो दिन काममा एकदम खटिएछन् । आफ्ना हाकिमलाई प्रभावित गर्नका लागि राति अबेरसम्म काम गरेछन् । भोलिपल्ट हाकिमले उनलाई बोलाएर उनले गरेको कामको रिपोटिङ्ग गर्न भनेछन् ।
ती व्यक्तिले एकदमै प्रफुल्लित मुद्रामा भनेछन्, सर ! मैले हिजो राति १२ बजेसम्म काम गरेर सारा उल्टोपाल्टो भएको चिजलाई मिलाएँ ।
हाकिमले प्रश्न गरेछन् – के त्यस्तो उल्टोपाल्टो थियो र तिमीले मिलायौ ?
उनले अझै उत्साहित हुँदै भनेछन् – सर ! हाम्रो अफिसको कम्प्युटरको सम्पूर्ण किबोर्डहरु उल्टोपाल्टो रहेछ, त्यसैले सम्पूर्ण अक्षरहरुलाई क्रमवद्ध तरिकाले मिलाएँ, अहिले ए देखि जेडसम्म सबै क्रमबद्ध मिलेको छ ।
यस्तो मेहनत गरेर सफलता खोज्नु मूर्खता हो । कुनै पनि मेहनत गर्न साँच्चै नै आवश्यक छ कि छैन, त्यस कुरामा ध्यान दिएर मेहनत गर्नुपर्छ । अन्यथा, मासको दालमा बेसार राखेर पहेंलो बनाउँछु, भने जस्तै हुन्छ ।
गलत स्वीच दबाएर बत्ति कहिल्यै बल्दैन । गर्मीबाट बच्नु छ भने ज्याकेट फुकाल्नुपर्छ । ज्याकेट मन पर्छ भन्दैमा गर्मीमा पनि लगाइरह्यो भने त्यसले पोल्न थाल्छ । जाडोबाट बच्नु छ भने ज्याकेट लगाउन अल्छी गर्नुहुँदैन ।
ज्याकेट जस्तै मानिसले मनपर्ने चिज, बानी छाड्न सक्नुपर्छ । कहिलेकाँही बोक्न भारी हुने अप्ठ्यारो काम, अप्ठ्यारा साथीहरु तथा अन्य वातावरणहरुलाई पनि मिलाएर लैजानुपर्ने हुन सक्छ ।
निश्कर्षमा, मानिसले धेरै काम गर्‍यो भन्दैमा सफल हुँदैन, सफल हुनका लागि सही काम गर्नु आवश्यक हुन्छ ।(लेखक बैंकर हुन्)
← हिमानी शाह रास्ट्रपति हुन सुहाउने मान्छे, राजदरबारको सुखसयल भित्रको तितो आत्माकथा, पारसले गर्दा यस्तो पिडामा रहेछिन् (भिडियो) → नारायणगढ-मुग्लिन सडक पुस २२ सम्म बन्द, थपिएको म्यादमा काम सकिएन